राम्रोसँग सुत्न कस्तो खाने ?
चैत २०, २०७३ आइतवार १७:५२:४३ प्रकाशित
एजेन्सी – शरिरलाई उर्जा प्रदान गर्न उपर्युक्त खानेकुराको महत्व निकै हुन्छ । तर त्यो भन्दा महत्व कतिखेर के खानेकुरा खाने भन्नेमा हुन्छ । हामीले खाने खानाको निन्द्रासँग पनि गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । तसर्थ तपाईलाई दिउसै निन्द्राले झुमाएको छ वा बिहान अबेसम्म पनि ब्युझिन सक्नुभएको छैन भने यसको दोष खानेकुरामा पनि हुन्छ ।
खाना र निन्द्राबीच के छ सम्बन्ध ?
एक अध्ययन अनुसार राम्रोसँग सुत्न नसक्ने तर सामान्य स्वास्थ्य भएका बयस्कले उच्च मात्रामा चिनी र चिल्लोचाप्लोयुक्त खाएमा उनीहरु बारम्बार ब्युझिन्छन् । अर्थात् चिनि र चिल्लोले रातको निन्द्रा कमजोर बनाउँछ । अर्कोतर्फ सन्तुलित खाना, बढी प्रोटिन खाने मानिस निकै चाँडो निदाउँछन् । विज्ञहरुका अनुसार नियन्त्रित खानेकुरा खादा १७ मिनेटमा निदाउने मानिस आफ्नो इच्छा अनुसारको खानेकुरा खाँदा भने २९ मिनेटमा मात्र निदाउँछ ।
सुत्नमा कठिनाईको समस्या देखिनुमा पर्याप्त डाइटको अभाव र सोडियमको मात्रा बढी पनि हो । न्यून कार्बोहाइडे«ड, भिटामिन डी, लाईकोफेनले पनि राम्रो निन्द्रा लाग्दैन । अर्कोतर्फ भिटामिन सी, क्याल्सियम र पानीको अभाव वा शरिरमा कोलेस्ट्रोल वा फ्याटको मात्रा बढी हुँदा जतिखेर पनि निद्रा लाग्ने गर्छ । अस्वस्थकर खानाले निन्द्रासँग सम्बन्धित अन्य समस्या ल्याउँछ ।
स्वस्थ्य खानेकुरा खानु आफैमा उत्तम बिचार हो । कतिपय यस्ता खानेकुरा छन जसको उपभोगले तपाईलाई मस्त निन्द्रा लाग्छ । कहिलेकाहिँ फ्याटी खानेकुरा खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो तर नियमित रुपमा यस्ता खानेकुरा खाँदा तपाईको निन्द्रा भने भगाइदिन्छन् । अस्ट्रेलियामा गरिएको एक अध्ययन अनुसार उच्च चिल्लोयुक्त पोषण खाने मानिसलाई दिउसको समयमा बढी उँघ्छ ।
क्याफिनः कफी आफैमा शक्तिबद्र्धक पदार्थ हो । कफी पिउदा प्राय मानिस रातमा पनि जाग्राम बस्छन् । तर, दिउसोको समयमा एक पटक कफी खाँदा निन्द्राबाट मुक्ती हुन्छ र हाम्रो दैनिकी सहज हुन्छ । गर्भवती र बालबालिकालाई कफीले फाइदा गर्दैन । दिउसोमा दुई तीन पटक वा राती सुत्नुअगाडि कफी खाँदा इन्सोमेनिया वा निन्द्रामा असन्तुलन हुन्छ ।
गुलियो खानेकुराः गुलियो खानेकुराले हाम्रो निन्द्रालाई नकरात्मक अशर गर्छ । त्यही भएर प्राय महिलाले आफ्ना नानी बाबुलाई सुत्नु अगाडि गुलियो खानेकुरा, क्यान्डी तथा चकलेट खान दिँदैनन् । चिनिलाई शरिरले सजिलै गलाइदिन्छ जसका कारण ब्लड ग्लुकोजको तहमा उतारचढाब ल्याइदिन्छ । फस्वरुप तपाईलाई निन्द्राबाट बञ्चित गर्छ ।
मरिच, खुर्सानी र अत्यधिक मसलायुक्त खानाले पनि कतिपय मानिसको पाचन प्रणालीमा असर गर्छ । जसका कारण निन्द्राको सन्तुलन विग्रन्छ । अझ सुत्ने समयमा मसलादार खानेकुरा खाँदा त रातभर जाग्राम बनाइदिन्छ ।
फास्ट फुडः प्रायजसो प्याकेटमा उपलब्ध हुने फास्ट फुड तपाईको निन्द्राका शत्रु नै हुन् । चिल्लाा, कार्बोहाइड्रेडयुक्त, सन्तृप्त फ्याट र सोडियमको मात्रा उच्च भएका खानेकुराले रातको निदलाई नकरात्मक असर गर्छ ।
मदिराः मदिराले गहिरो निन्द्रा लाग्नुका साथै घुर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । नशाको सुरुमा केही समय गहिरो निन्द्रा लागे पनि केही समयपछि अनिन्द्रा बढ्नुका साथै दिउसभर आँखा झुल्छ ।
मध्यान्नमा नसुत्नेः बिहानको खानापछि लाग्ने निन्द्राकै कारण धेरै मानिस समस्यामा पर्ने गरेका छन् । अलि दहे लन्च गर्दा निन्द्राले बढी झुम्ने र काम गर्दा ध्यान भंग हुन सक्छ। लन्चको समयमा बढी कार्बोहाईड्रेडयुक्त खाना खाँदा दिउसो उम्ने समस्या कमि हुन्छ ।
दिउसो हैन राती सुत्नुहोस्ः कतिपय मानिस मध्य रातसम्म नसुत्ने तर दिउसोको समयमा सुत्ने बानी हुन्छ । व्याबासायिक वा पेशागत बाध्यता बाहेक दिउसो सुत्नु राम्रो होइन । सन्तुलित खानाले निन्द्रामा सुधार ल्याउने र दिउसभर फूर्तिलो बनाउछ । निन्द्रालाई अशर गर्ने खानेकुरा छोड्नुको अतिरिक्त निश्चत प्रकारका खानेकुरा खाएर पनि सुत्न सकिन्छ। ट्राइपटोफान एटा स्वभाविक रसायन हो यसले दिमागलाई शान्त र निन्द्रा प्रदान गर्ने सेरोटोनिन उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ । बदामको दुध, अन्डा, चकलेट ट्राइपटोफानका महत्वपूर्ण स्रोत हुन् ।